စာဖတ်ချိန်: 11 မိနစ်များ ပြင်သစ်ရှည်လျားဥရောပတိုက်တွင်လူကြိုက်အများဆုံးခရီးသွားနေရာများတစ်အကြိုက်ဆုံးနှင့်တဦးတည်းခဲ့. ဒါကြောင့်အနောက်တိုင်းဥရောပတိုက်တွင်အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်ကြောင်းပေးထား, ဒါကြောင့်ရထားခရီးသွားမှသဘာဝကျပါတယ်. ပြင်သစ်အစိုးရမြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းအတွက်ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားပါတယ် (LigneaGrande Vitesse…
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ ဥရောပ၌ကျော်ကြားရုံဥရောပယဉ်ကျေးမှု၏ထည်သို့ယက်နေကြ. ဥရောပ၌နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ရုံသင်သည်ထူးခြားသောတင်ဆက်မှုကတိပေး. ဒါဟာနှိုးဆော်သင်ချန်ထားမည်, ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် spellbound! အနုပညာဖျော်ဖြေ၏သဘောသဘာဝ spectacularly ခဏနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုယ်ကဖြစ်ပါတယ်. ဤထက်မြက်သောအလင်းတန်းများသည်ဆက်ရှိနေသည်…
စာဖတ်ချိန်:5မိနစ်များ ဥရောပကော်ဖီတစ်ဦးဖတ်ရင်ဘာမှန်းမသိငွေပမာဏကိုထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်စားသုံး, ဒါကြောင့်ဥရောပအကောင်းဆုံးကော်ဖီဆိုင်များနှင့်ကဖေးရှိပါတယ်. ဒါဟာကော်ဖီချစ်သူများမက္ကာနှင့်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးဖြစ်ပါသည်, အလွန်ကြီးစွာသောသဘောတူညီချက်ပိုပြီးရုံထက်. ကဖေးယဉ်ကျေးမှုကမ္ဘာတွင်မယ့်ပြတင်းပေါက်ဖြစ်ပါသည်. ငါတို့ရှာသည်…
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားစပိန်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားယူကေ, ...